Xayndaabkii Biritish-ka iyo qabiilada Soomaaliyeed [Cilmi-baaris]
By GAROWE ONLINE , Othman A. Mohamud
Othman A. Mahamud Founder AMNI Centre For Security Analysis & Development, Research Organisation, Garoe Puntland, Somalia
Markii Dawladii dhexe kacaanka 1991kii ay dhacday, dalka Somaliyeed wuxuu guda-galey dagaalo sokeeyo. Jabhadihii ka soo horjeeday xukumadii Siyaad Bare ayaa markii dambe isu badalay kuwa dhexdooda hardama siyaabo badan awgood. Jabhadii SNM oo ka dagaalantay gobalada waqooyi 1991kii waxay ku dhawaqday in Dalka Soomaaliya inteeda kale ka madaxbanaan tahay Somaliland loo yaqaan intii dhulka British Somaliland la oran jirayna hadafkeedu yahay in ka taliso ictiraaf caalamka ka dalbato. 27 sano ka dib Somaliland wali ictiraaf ma helin.
Qaybo ka mida qabiilada degan intii British Somaliland la isku oran jiray iskood gacan saar iyo heshiis ula yeesheen British-ka xiligii bada-cas soo dagay cidna wakiil kama noqon makii hore hadana waxay u arkan in masiirkooda iyagu u madax banan yihiin. Halka kuwa kalena qabiilada halkaa dega aysan marna wax heshiis la yeelan Britishka sida darteed markii la fiirsho sharciyadii u degsanaa dawladaha Isticmaarka waxaa shaki wayn ku jiraa in qabiilada ama qabiilkaa isaga ah xayndaabkii isticmaarka British Protoctorate ka mid yahay marka la fiirsho xeerarkii Isticmaarka u dagsanaa ka mid ahaanshaha inta ay xukumaan.
Cilmi-baaristan oo ka kooban 16 bog ayaa diiradda saali doonta arrimo ay kamid yihiin; Xuduuda, Somaliland, heshiiyadii, British Protoctrate, ‘hinterlan theory’.
Xogtan oo aad linkiga Buluuga ah ka heli kartaan isagoo PDF; Xayndaabkii-british-ka-qabiilada-somaliyed.pdf ​
Qoraalkan kama Turjumayo Aragtida Warsidaha Garowe Online, balse wuxuu u gaaryahay qoraha Magaciisu yahay Othman A. Mohamud oo ah aas-aasaha xarun lagu magacaabo AMNI Centre For Security Analysis & Development, Research Organisation.
Mukhtaar Roobow ayaa la xiray bishii December 15 kahor doorashadii Koonfur Galbeed.
Axmed Madoobe oo gaarey Afmadow iyo gulufka dagaal oo ka socda Jubbaland [Sawirro]
War Saxaafaded 07.01.2019. 18:49
ONLF oo ku dhawaaqey xisbi siyaasadeed ka qeyb-galaya doorashada DDSI
Afrika 01.01.2019. 18:35
Soomaaliya iyo Qadar oo kala saxiixday shan heshiis iyo Sedex is-afgarad
War Saxaafaded 13.12.2018. 23:42
Heshiis laga gaarey Colaaddii Gobolka Sool iyo Ganaaxyo la dul dhigey Beelaha
Puntland 07.12.2018. 19:54
Khayre oo Maamullada ku qancinaya Heshiiska Kalluumeysiga ee Shirkadaha China
Soomaliya 11.02.2019. 23:34
Weerarada Sri Lanka: Dad la xiray xili baraha bulshada oo la xanibay 21.04.2019. 14:59